Mané oo si jees jees ah kaga jawaab celiyay xaqiiqada ku aadan inuu jiro loolan u dhexeeya isaga iyo Saalax – Gool FM
Mané oo si jees jees ah kaga jawaab celiyay xaqiiqada ku aadan inuu jiro loolan u dhexeeya isaga iyo Saalax
(Liverpool) 6 Maarso 2019. Ciyaaryahanka reer Senegal ee Sadio Mané ayaa ka hadlay xaqiiqada ah inuu jiro tartan kala dhexeeya saxiibkiis Maxamed Saalax, ee ku aadan ku guuleysiga abaal marinda shaqsiga ah.
Sadio Mané ayaa wareysi uu ku bixiyay Wargeyska World Soccer ayaa waxaa wax looga weydiiyay in ku guuleysiga abaal marinda shaqsiga ah ay loolan adag ka dhex abuuri karto asiga iyo Saalax.
“Miyaad jeceshahay in Moxamed Saalax aad kula tartanto abaal marinda shaqsiga ah?”.
Balse ciyaaryahanka reer Senegal oo si jees jees ah u dhoola cadeenaya ayaa jawaab celin kaga dhigay:
“Ma waxaad doorbideysaa inaan sheego, inuu jiro tartan u dhexeeya aniga iyo Saalax”.
“Warbaahinta ayay u muuqata inay rajeenayaan inuu jiro tartan gaar ah, laakiin taasi ma ahan wax jira”.
“Qof kasta oo kooxda jooga waxa uu sameynayaa wax walba si ay u guuleysato Liverpool, ma ahan arin gaar ah ee quseysa Saalax ama Mané”.
“Waxaan ku matalnaa kooxda iyo magaalada, sida ugu fiican ee aan awoodno, Saalax wuxuu jecel yahay Liverpool sida aniga oo kale, wuxuu soo bandhigay qaab ciyaareed fiican tan iyo markii uu yimid Reds”.
“Waxaan dooneynaa in aan si wada jir ah ugu wada guuleysano koobab kooxda Liverpool, taasi waa waxa ugu horeeya ee aan xiiseeneyno, tan kale abaal marinda shaqsiga ah ma ahan wax aan xiiseeneyno”.
"Waligeyba waxaan Taageere u ahaa Ajax.". -Suarez oo ku raaxeysanaya jabkii xalay lagu dhigay Real Madrid